रुकुमको प्रसँगमा रेखा थापाले गरिन् युवतिको सपोर्ट भनिन केटीको बेइज्यत गरेर न्याय पाउने हो र ? (भिडियो हेर्नुहोस) – Butwal Sandesh
नवराज बिक र उनकी प्रेमिका भनिएकी मल्ल थरकी युवतिको घटनाको बिषयमा नायिका रेखा थापाले यसरि मुख खोलेकी छिन हेर्नुहोस जस्ताको तस्तै,रुकुम घटनाका दोसी माथि कर्वाही र पीडितलाई अबिलम्म्ब न्या,य दियियोस । यस घट,नामा जोडीएकी किशोरिको बारेमा जसरी चरित्र ह,त्या गर्ने खालका र नारी अस्मिताको धज्जी उडाउने काम भएको छ, तेस्ले फेरिपनी उत्पीडित वर्ग माथि प्र,हार भयो भन्ने लाग्छ ।
समाज बि,रुद्द अन्तर्जातिय प्रेम गर्ने सहास भएकी बालिकाको चरित्र ह,त्या गरेर न्या,य हुन्छ त? दो,षिलाई कानुनी का,र्वाही हुनु पहिले नै एउटा केटी मान्छेले आफ्नो सामाजिक र चारित्रिक सम्पत्ती बजारमा लीलाम गर्नु पर्ने ? नेपालमा केटी मान्छेको बेइज्यत गरेर मात्र न्या,य पाउने हो र ?
छानबिनको क्रममा रहेकी किशोरिको बारेमा अनर्गल कुरा लेख्ने छुट छ ? समुहमा बाहुन छेत्री, जनजाती जो जस्लाई गा,ली गर्नु छ गरे हुन्छ एउटा केटी मान्छेको पेटिकोट समातेर बिद्रोह हुन्छ ? दोषी वा निर्दो,षको किटान हुनु पहिले नै यसरी मानसिक हि,न्सा र प्रताडना दिएको कारण ति किशोरि नदिमा हाम्फलेमा कस्ले जवाफ दिन्छ ?
अन्तर्जातिय प्रेम गरेको सट्टा जसरी उस्को चरित्र ह,त्या हुँदैछ, यसले जातिबादी सोचलाई झन धेरै बालवालिकामा स्थापित गर्ने देखिन्छ । राज्य सँग लडनु पर्‍यो नि, एउटा १७ बर्ष कि किशोरिलाई मानसिक र सामाजिक उत्पिडन किन ? दोषी भये कानुनी कार्वाही गरियोस । यो नबिर्सौ कि एउटा किशोरिको जीवन ब,र्वाद पारेर न्या,य पाउने हो भने, कुनै पनि छोरीले भोली कसैलाई माया गर्ने छैनन ।